Wararka Maanta: Sabti, July 28, 2018-Maxkamada ciidamada qalabka sida oo la soo taagay horjoogayaal ku eedeysan in ay ka tirsan yihiin Daacish
Sabti, July, 28, 2018 (HOL) - Maxkamadda Derejada koobaad ee ciidamada qalabka sida ayaa maanta waxaa ka soo hor muuqday Labo horjooge oo sida ay maxkamadu sheegtay ka tirsan Ururka Daacish ee dagaalama qeybo ka mid ah dalka Soomaaliya.
Mahad Max’ud Cabdi oo loo yaqaan (Abtidoon, Abuu-Yaasiin) iyo Max’ed Daa’uud Daahir Warsame oo isagana loo yaqaanno (Dr Raage) ayaa loo heystaa in ay ka mid ahaayeen hor-joogayaasha kooxda Daacish.
Maxkamada ayaa sheegtay in gaar ahaa mahad Mahad Max’ud Cabdi daadaal xoogan ugu jiray sidii uu u aas-aasi lahaa koox kale oo ka tirsan isla Daacish kuwaa oo ka madax banaan Daacish-ta ah ee uu hugaamiyo Cabduqaadir Muumin.
Waxaa uu heystaa dhalashada Ruushka oo uu muddo ku maqnaa, waxaa uu sidoo kale ku soo qaatay qeyb ka mid ah noloshiisa waddanka Syria, isagoo ugu dambeyn ku biiray kooxda Daacish uu ka mid noqday kuwa ugu sarreeyo balse mar dambe oo ay is qabteen hor-joogaha kooxda Daacish ayuu go’aansaday in uuu aas-aaso koox kale.
Max’d Daa’uud Daahir Warsame, oo magiciisa Af-garashada yahay (Dr Raage) ayaa isna lagu eedeeyay in uu ahaa madaxa maaliyadda kooxda, sidoo kale ahaa caawiye xagga caafimaadka ah ayaa cadeymaha Maxkamadda lala keenay waxaa ka mid ahaa Akoonada Lacageed ee uu isticmaalay iyo shirakidihii uu ka isticmaali jiray Lacagaha.
Guddoomiyaha Maxkamadda D. 1-aad ee ciidamada Qalabka Sida G/sare Xasan Cali Nuur Shuute ayaa soo xiray fadhiga Maxkamadda, waxaa uuna u sheegay dhammaan ka qeyb-galayaasha in maxkamadda ay go’aanka dib ka soo saari doonaan.